प्रेसविरुद्ध प्रदेश- विचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २५, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — प्रेसप्रति केन्द्रले सहिष्णुता कम गर्दै गएका बेला प्रदेश सरकारहरू पनि के कम ? यस्तैमा प्रदेश–३ सरकारले प्रेसलाई प्रतिबन्ध नै लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन लागेको छ  ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभामा पेस गरेको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा त्यस्तै प्रावधान प्रस्तुत गरिएको छ । दफा २६ मा एकातिर ‘कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरेबापत त्यस्तो पत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन’ उल्लेख छ ।
अर्कातिर त्यसमै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ जसमा उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली, बेइज्जती वा अदालतको अपहेलना हुने वा अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा व्यक्तिको नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन ।’
सञ्चारसम्बन्धी यो विधेयक प्रदेश सरकारको अल्पज्ञानको बलियो नमुना हो । यो मुलुकको संविधानको मर्मविपरीत छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्ने संवैधानिक प्रबन्ध रहनुको अर्थ प्रतिबन्ध लगाउने वा खारेज गर्ने भनिएको होइन । मिडिया व्यवस्थापन भनेको दुरुत्साहन होइन ।
विधेयकका ५८ दफामध्ये मोटामोटी १७ वटा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका छन् । सञ्चार माध्यमको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान त सोझै संविधानको भावनाविपरीत भएकाले खारेजयोग्य छ । विधेयकले प्रकाशन, प्रसारणको विषयलाई सरकारवादी मुद्दा बनाउन खोजेको छ । यो गलत मनसायबाट आएको छ ।
मिडिया व्यवस्थापनबारे देशमा आज पनि पञ्चायतकालकै नियन्त्रणकारी सोच, शैली र सिद्धान्त जारी छ । राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै बढ्ने नागरिक अधिकारको सुरक्षा गर्न स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक पर्छ भन्ने बुझाइ अझै पनि राजनीतिक नेतृत्व तहमा स्थापित हुन सकेको छैन । प्रेसलाई सरकार मातहत सोच्ने, सरकारी कामसरह हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ । प्रेस जातैले स्वतन्त्र हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने संस्कार बन्न पाएको छैन ।
केन्द्रमा पञ्चायतकालदेखि सरकार मातहतको सूचना विभागले पत्रकारहरूको सूचना पास वितरण गर्दै आएको छ । पत्रकारहरूको सूचना पास सरकारले दिनुपर्ने प्रयोजन आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल छ । पत्रकार सरकारी कर्मचारी होइनन् । पत्रकारलाई सरकारले प्रमाणपत्र दिने होइन । स्वतन्त्र सञ्चारको न्यूनतम सर्तहरू पनि ख्याल गरिएको छैन ।
प्रेस पास त जुन पत्रकार जुन मिडियामा काम गर्ने हो उसैले दिने हो । जसले रोजगारी दिने हो उसैले प्रमाण दिने हो । केन्द्रमा रहेको यो असंगति हटाउने प्रयत्न भएको छैन । प्रदेशअन्तर्गत पनि धेरै मिडिया सञ्चालित छन् । यिनलाई नियमन कसले गर्ने ? केन्द्रले कि प्रदेश आफैंले भन्ने प्रश्न छ ।
पत्रकारिताप्रति बफादारिता देखाउन राजनीतिक नेतृत्व तयार नै भएको छैन । यही गल्ती फेरि प्रदेशले दोहोर्‍याउन खोजेको छ । प्रदेशलाई स्वतन्त्र पत्रकारिताले बलियो बनाउँछ कि केन्द्रीयताले ?
प्रेसप्रतिको अल्प बुझाइ संविधानप्रतिको अज्ञानता हो । लोकतन्त्रप्रतिको मर्यादामा कमी हो । स्वतन्त्र सूचना र विचारको वातावरण जनअधिकारको पूर्वाधार हो भन्ने बुझ्न नसक्नु, नचाहनु हो । अयोग्यता हो ।
प्रकाशित : आश्विन २५, २०७५ ०८:०७